Nhau - Kamwe kamwe novhero Coronavirus yakavhiringidza kutengeserana kwepasirese.
Yangoerekana inova Coronavirus yakavhiringidza kutengeserana kwepasirese. Vatengi vazhinji vanonetsekana kuti havana mainjiniya ekumisikidza kana kugadzirisa michina yavakange vatenga kubva kuChina Hongu, ichokwadi kuti vazhinji vatengesi vane dambudziko iri, asi kwete mukambani medu, nekuti mukuwedzera kune maChina mainjiniya, isu zvakare tine vane ruzivo rweinjiniya veIndia, uye mainjiniya eJordanian. Ingo muna Mbudzi, mainjiniya edu eIndia akaenda kuYemen kunogadza EPS Shape Molding Machine yekugadzira mutsara. Mutengi akatenga iyo yese EPS SHAPE KUUMBISA MACHINE MUZHINJI, kusanganisira EPS BATCH PREEXPANDER, SILOS, EPS SHAPE KUCHENGA MACHINE, EPS MOLD NEZVIMWE ZVINODIWA ZVINOKOSHA ZVOKUDZIDZA. Zvese zvinhu zvakafamba mushe panguva yekumisikidza, zvichibatsira mutengi kutanga zvigadzirwa nenguva.
Yedu Yemen mutengi fekitori inonyanya kuburitsa EPS dovetail yekuisa zvidhinha, inova yepakati kuputira rukoko rweEPS yakadzivirirwa sandwich yezvidhinha, kongiri-EPS-kongiri zvidhinha. Ichi chigadzirwa chakakurumbira muMiddle East nyika. Mutengi weYemen akaisa hurongwa kwatiri asina kushanyira China. Kubudikidza nepamhepo kutaurirana, isu takatsanangura edu EPS michina maratidziro uye zvakanakira, isu takamuratidza iye mavhidhiyo eedu EPS michina anoshanda, isu takamutsanangurira ake ese hunyanzvi mibvunzo zvine hunyanzvi, isu takaita yekugadzira mutengo ongororo kwavari kuitira kuti vagone kuita nyore kuitisa kudzidza kudzidza mushumo. Mushure memwedzi miviri kutaurirana, vakasarudza kushandira pamwe nesu. Asi nekuti yaive yekutanga nguva yekudyidzana uye isu hatina kumbosangana, mutengi akapa mvumo kune wechitatu-bato rekuongorora agency kuti aongorore michina yese mushure mekugadzirwa, uye kutarisa midziyo kurodha panzvimbo iyi. Iko kuongorora, kubva pakuiswa kwezvigadzirwa kusvika pakugadziriswa kwemachina ari mumudziyo, vakapasa kuongorora kwavo mushe. Ehezve, yakadaro mhando yechitatu-bato kuongorora haisi nguva yekutanga kwatiri. Isu tinogamuchira chero mutengi kuti awane chechitatu-bato masangano kuti aongororwe.
Sewe EPS muchina anotengesa ane anopfuura makore gumi neshanu ezviitiko muindasitiri yeEPS, zvichibva pane pfungwa yemhando yekutanga uye mutengi kutanga, tinogara tichitanga kubva pakuona kwevatengi uye kugadzirisa matambudziko kune vatengi. Regai kubatana kwedu kuhwine-kuhwina! Isu tinogamuchira shamwari dzine hurongwa hwekuvhura mafekitori ePS kana kushandura EPS michina.
Kana iwe uchida EPS muchina, ndapota taura nesu, maita basa!
Post nguva: Jan-03-2021